Umgangatho wase China izixhobo ezizenzekelayo, izinto ezilahlwayo zofa, ixabiso lezinto ze-Dongguan Yiwei Precision Hardware Products Co LTD
CNC kunye lathe oluzenzekelayo processing
Ukulungiswa kweposi ye-CNC
Iindawo Auto afe eyahlulayo
Unxibelelwano die bephosa iindawo
I-Aluminium die yokuphosa izixhobo zokusebenza
Ngesithuthuthu die iindawo eyahlulayo
I-aluminium ingxubevange yokufa izixhobo zamandla
Ubhedu bealuminium intsimbi yokwenza izixhobo
Ukufa kwendlu yezixhobo zamandla
Ibhokisi yesilawuli sevidiyo
I-aluminium alloy die die ikhupha izindlu ze-servo
Izithuthi zamandla amatsha ziyafa zilahla izindlu zombane
I-Dongguan Yiwei Precision Hardware Co, Ltd. yasekwa ngo-2010. Ukusukela oko yasekwayo, besisoloko si-abathengi, sibambelela kuwo onke amandla, kwaye sanelisa iimfuno zabathengi. Ngemizamo yethu eqhubekayo, siye saqulunqa ikhonkco elipheleleyo kwimizi-mveliso kuyilo lwemveliso kunye nophuhliso, imveliso kwimveliso yenkqubo yokuphuculwa kwemveliso ngokubhekisele kwizixhobo ze-zinc-aluminium alloy die-casting, imveliso ye-copper-aluminium ekwenziweni, i-CNC machining, njl. Iitoni ezingama-5 000 zezixhobo zokwenza izinto, iitoni ezingama-3 000 zezixhobo zokwakha, iitoni ezili-1,250 zezixhobo zokuphosa izixhobo zokufa, iitoni ezingama-280 zezixhobo zokuphosa izixhobo, kunye neetoni ezingama-88 zezixhobo zokuphosa izixhobo zealuminium. 10 iiseti 850 / 650CNC, 3 iiseti zamaziko axis ezine-axis, iiseti 4 lathes CNC, 4 iiseti koomatshini engundoqo, nto leyo ukuhlangabezana nemveliso kunye nophuhliso iimveliso 'abathengi ezahlukeneyo; inokuhlangabezana neemfuno zophuhliso lwabathengi ukusuka kwiimveliso ezilula ukuya kwezintsonkothileyo. Kwicandelo lokuqinisa, inkampani yethu ineqela elomeleleyo lophuhliso, kwaye igcina intsebenziswano yexesha elide kunye nophando olunzulu kunye neengcali zeshishini. Unamava abanzi kwicandelo lezithuthi ezitsha zamandla kunye nonyango.
Izixhobo umatshini CNC kunye lathe oluzenzekelayo processing iindawo ngqo processing
Lathes oluzenzekelayo inkqubo iinxalenye zobhedu
Inkqubo ye-CNC lathes aluminium
Inkqubo lathes CNC iinxalenye zobhedu
CNC machining izahlulo oluzenzekelayo
Ukuchaneka kwe-CNC kwemveliso eyenziweyo
Iimveliso zokuphosa izixhobo ze-CNC
Idilesi: 21 Bailang Xinwei Street, Qingxi Town, Dongguan isixeko, kwiPhondo Guangdong
Ifowuni: +86 13790272346
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24. Ixabiso lezinto ezizenzekelayo, izinto ezilahlwayo zokufa, izixhobo ze-Smart zezona ziphantsi kodwa zikumgangatho olungileyo.
Impendulo: Ngexesha lenkqubo yemveliso yokufa, ukutshiza izixhobo zenkqubo yokuthambisa kunye nezicoci eludongeni lomngxunya, umphezulu womhlaba, ukungunda kunye nokufa komlinganiso womatshini (ezifana nezilayida, izinto ze-ejector, amanqindi kunye Amagumbi enaliti) Lo mxube waziwa njengelizwe lokuhombisa intsimbi. 2. Uyintoni umsebenzi wokulahla idiski? Impendulo: (1) Gcina intsebenzo yokuthambisa efanelekileyo kumaqondo aphezulu obushushu;
Izinto eziluncedo zokuthetha ngamavili kunye neevili ezilahliweyo kwizithuthuthu2021/01/18
Isondo elithethileyo (emva koku libizwa ngokuba livili elithethileyo) laqanjwa yiRenault ngo-1869. Yayisetyenziselwa iibhayisikile kwaye kamva yaphuculwa yaba zizithuthuthu neemoto. Izipikha zaqanjwa kwangethuba kakhulu, kwaye itekhnoloji yayiqolile kakhulu. Inezi zinto zilandelayo:
@Copyright 2020-2021 Dongguan Yiwei Precision Hardware Iimveliso Co LTD